हर्ट–अट्याक हुनुभन्दा १ महिनाअघिदेखि शरीरले दिन्छ यस्ता संकेत- बेवास्ता नगरौ ,मृत्युबाट बचौं — Imandarmedia.com
हर्ट–अट्याक हुनुभन्दा १ महिनाअघिदेखि शरीरले दिन्छ यस्ता संकेत- बेवास्ता नगरौ ,मृत्युबाट बचौं
काठमान्डाै । यो अति जरुरी जानकारी सबैमा सेयर गरौँ । हृदयघात युवा वयष्क या वृद्धवृद्धा जुनसुकै उमेरमा पनि अकस्मात हुन सक्छ, यो घातक शव्दको नाम सुन्दा पनि धेरैलाई डर लाग्छ । आज सबै ठिक ठाक रहेको मानिस भोली मृत्युको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ, यो जतिखेर
पनि जहाँ पनि आउन सक्छ । हृदयघातका कारण हरेक वर्ष धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ । बूढाबूढीलाई मात्र हृदयघात लाग्छ भन्ने होइन । यौवनावस्थामा रहेका व्यक्ति पनि यसको शिकार हुन्छन् । हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनापहिले नै यसको लक्षण देखिन शुरु गर्छ । यसमा ध्यान दिँदा यसको खतराबाट बच्न सकिन्छ ।
अन्य भागमा पीडा छाती वा शरीरका अन्य भागमा पीडा भयो भने हृदयघातको संकेत हो ।छाती बाँउडियो भने त पक्का हृदयघातको लक्षण हो ।सास लिन अप्ठ्यारो सास लिन गाह्रो भयो भने पनि हृदयघातको लक्षण हो । यस्तोसमस्या महिलाहरूमा बढी देखिन्छ ।पाचनतन्त्रमा गडबडी पाचनतन्त्रसँग जोडिएका समस्या छ भने बेवास्ता नगर्नुस् । यो पनि हृदयघातको लक्षण
हुनसक्छ ।आत्तिने लगातार तनाव, चिन्ता र डर महसूस गर्नुहुन्छ भने सम्भावित हृदयघातको लक्षण हुनसक्छ । अत्यधिक पसिना कसरत वा हिँडडुल गर्दा अत्यधिक पसिना आउनु त सामान्य कुरा हो र अकारण पसिना आयो भने चाहिँ हृदयघातको लक्षण हो । गोडा फुल्ने मुटुलाई शरीरका अन्य अंगमा रगत पु–याउन समस्या आएमा शिराहरू फुल्छन् । यो फुल्नु भनेको हृदयघातको लक्षण हो ।ढुकढुकी बढ्नु धेरै
दिनसम्म नसा र ढुकढुकी तीव्र गतिमा दौडिरहेका छन् भने बेवास्ता नगर्नुस् र चिकित्सकलाई अवश्य देखाउनुस् ।हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? र यसको असर के हो भन्ने बारेमा आज पनि मानिस जानकार छैनन् । आज हामी हर्ट अट्याक हुनुको कारण र यसले शरीरमा पर्ने असर बारे चर्चा गर्दैछाैं । कमजोर मुटु
मानिसको मुटु मजबूत कोशिकाहरुले बनेको हुन्छ । जसका कारण हाम्रो मुटु स्वस्थ रहन्छ तर आजभोलिको अस्वस्थ्य खानपिनका कारण कम उमेरमै यसमा समस्या आउने गरेको छ । ज्यादा धूम्रपान गर्ने मानिसलाई हार्ट अट्याकका खतरा ज्यादा हुन्छ भने कहिले काही यो वंशाणुगत कारणले पनि हुने गरेको छ । रक्त सञ्चारमा रोकावहम्रो शरीरमा मटुको काम भनेको अक्सीजन, पोषक तत्व तथा रगतलाई पम्प गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पु-याउने हो ।
तर बढ्दो उमेरका साथ साथ या खराब खानपान र जीवन शैलीका कारण मुटुमा पुग्ने रक्त प्रवाहरमा रूकावट हुन्छ जसका कारण हर्ट अट्याक कारण बन्छ । रगतको प्रवाह जब हाम्रो शरीर को धमनिमामा रुवावट हुन्छ तव शरीरमा रक्त प्रवाह सुचार हुन सक्दै जसका कारण कायौं पटक हर्ट अट्याक हुन सक्छ ।
धमनिमा विभिन्न पदार्थहरु जम्मा हुन जाँदा रक्त सञ्चारमा रोकावट हुन्छ । जसका कारण दौडिदा मुटु धेरै धड्कन्छ वा पम्प गर्छ तर रक्तनलिमा रुकावट आउदा आवश्यकता अनुसारको रक्त प्रवाह हुन सक्दैन र हर्ट अट्याक हुन जान्छ अक्सीजनको कमीधमनि बन्द भएसँगै हाम्रो मुटुमा पर्याप्त मात्रामा रगत तथा अक्सीजन पुग्दैन जसका कारण तिव्र रुपमा धड्कन जान्छ र श्वास फेर्न समस्या आउँछ । जो हार्ट अट्याकको कारण बन्छ ।
दिमागमा समस्या जब मुटुमा अक्सीजन को कमी हुन थाल्त तव मुटुले मस्तिष्कमा इमरजेन्सी सिग्नल पठाउँछ । त्यसपछि मस्तिष्क यो इमरजेन्सी सिग्नल हड्डीमा पठाउँछ र मुटुमा अक्सीजन को कमी भएपछि शरीरको दोस्रो हिस्साको अक्सीजन सप्लाई कम गरिदिन्छ । यस्तो स्थितिमा शरीर को दोस्रो हिस्सा जस्तै गर्दन, कान, काँध, पाखुरामा पीडा हुन्छ । भने टाउँको बीचमा चर्को दुखाइ हुन्छ, जो हर्ट अट्याकको संकेत हो ।
संकेतः दुखाइ हर्ट अट्याकको पीडा झेल्नु मुटुको मजबूतीमा निर्भर हुन्छ । यही कारण जवानहरुले हर्ट अट्याकको पीडालाई सामान्य रुपमा झेल्ने गरेका छन् । यो पीडा केही क्षण मात्र हुन्छ भने कही अवस्थामा भने यो कयौं घण्टा सम्म पनि हुने गरेको छ ।यस्तो स्थिति मा तुरुन्त डाक्टरसँग जाँच गराउन आवश्यक छ ताकि समय रहदै यसमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
समय रहदै सही उपचार न गर्नका कारण मुटुको मांसपेशिहरु विस्तारै विस्तारै निष्क्रिय हुदै जान्छ र अन्तिममा मुटुले काम गर्न बन्द गर्छ । यस्तो स्थितिमा केही मिनेटमा नै मस्तिष्कको कोशिका पनि काम गर्न छोड्छन् ।अट्याकपछि के हुन्छ ? हर्ट अट्याक पछि मुटुका केहि हिस्साले काम गर्न छोड्छन् जो फेरि ठिक हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । जसका कारण हर्ट अट्या पछि जुन सुकै समयमा पनि ज्यान जान सक्छ ।